भाइरल भिडियो : नगर प्रहरी एक बृद्दामाथी यस्तो अत्याचार गरेँ (भिडियो सहित) – Wow Sansar
भाइरल भिडियो : नगर प्रहरी एक बृद्दामाथी यस्तो अत्याचार गरेँ (भिडियो सहित)
काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो भाइरल भइरहेको छ। महिला रोइरहेकी छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले ती महिलालाई समातेका छन्। र उनको तरकारी, फलफुल र गाडा नियन्त्रणमा लिएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। ती अधवैंशे महिला नगरप्रहरीले गाडा र सामान जफत गरेपछि रोइरहेको भिडियोमा देखिन्छ। नगरप्रहरीले गरेको यो घटनाको कसैले मोबाइलबाट भिडियो बनाएर समाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्यो।
मंगलबार दिउँसो काठमाडौंको सुकेधारामा भएको यो घटनाको भिडियो बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। र भिडियो शेयर गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले सरकारसँग यी महिलामाथि ज्यादती भएको भन्दै प्रश्न गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो भाइरल बनेपछि डिसी नेपालले यो विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग यो विषयमा जिज्ञासा राख्यो। महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले फुटपाथमा व्यापार गरेकाले नगरप्रहरीले त्यसलाई उठाएको जानकारी दिए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘महानगर क्षेत्रमा फुटपाथमा व्यापार गर्न पाइँदैन। त्यो सबैलाई जानकारी भएको विषय हो। फुटपाथमा व्यापार गर्न कसैलाई पनि छुट दिन सकिँदैन। अहिले यो भिडियो भाइरल भएपछि महानगरको आलोचना भएको छ।’
महानगरले फुटपाथ व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन केही विकल्प सोचिरहेको उनले बताए। गत वर्ष नै योजना बनाइएको भए पनि कोरोनाका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए।
उता ती महिलालाई नियन्त्रण लिएको विषयमा जानकारी दिँदै महानगर प्रहरीका प्रमुख डीएसपी धनपति सापकोटाले महानगरको कानून कार्यान्वयन गरिएको बताए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘ती महिलालाई पटक पटक चेतावनी दिएका थियौं। अटेर गरेपछि गाडा उठाएका हौं।’ उनले गाडा महानगरले जफत गरेको तर, तरकारी र फलफुल भने फिर्ता गरेको बताए।
ती महिलाबारे थप जानकारी पाउन भने सकिएको छैन।
Nextदाङमा कपडा सुकाउने क्रममा छतबाट खस्दा एकजनाको मृ’त्यु
आयोगले ओलीलाई दियो बैधानिकता, दाहाल समूहलाई दिएन पार्टीको मान्यता !
एउटै नम्बरका दुई गाडी जम्काभेट,स्थानीयले हतार हतार प्रहरीलाई खबर गरेपछी के भयो ?
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6773)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3355)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1354)